Xiisado dagaal oo ka taagan Gedo Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Xiisado dagaal oo ka taagan Gedo Xiisado dagaal iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo u dhaxeeya dowladda iyo Al Shabaab ayaa laga dareemayaa magaalada Garbahaareey ee gobolka Gedo.
Xiisadahaani u dhaxeeya dowladda iyo Al Shabaab ayaa waxa ay ka dambeeyeen kadib markii ciidamo ka tirsan Al Shabaab ay soo buuxdhaafiyeen duleedka magaalada Garbahaareey ee gobolka Gedo oo ay gacanta ku hayso dowladda.
Al Shabaab ayaa la sheegay in ay diideen oo is hortaageen in gaadiidka ay galaan magaalada Garbahaareey islamarkaana ay ka baxaan taasina oo saameyn ku yeelatay isku socodka dadka ka bixi jiray magaalada iyo kuwa soo gali jiray.
Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya ayaa waxa ay dhaqdhaqaaq ciidan ka wadaan gudaha magaalada oo ay ku doonayaan in Al Shabaab ay ka saaraan duleedka magaalada halka Al Shabaab ay magaalada ku hareeraha kaga sugan yihiin oo dhankooda ay dhaqdhaqaaq wadaan taasi oo keeni karta dagaal labada dhinac dhexmara.
Al Shabaab ayaa wali ku dambeeya deegaano ka tirsan gobolka Gedo, waxaana mudooyinkii u dambeeyay weerar ku qaadayeen magaalada Garbahaareey oo doonayaan in ay mar kale la wareegaan.